आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस्
on: ६ पुष २०७५, शुक्रबार २०:०६ अन्तरवार्ता
आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस्
तेजनारायण खरेल, अध्यक्ष, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ (फिन)
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ (फिन) ले आज (शुक्रवार) देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विद्युतीय सामग्री तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेला ‘इलेक्ट्रो टेक–२०१८’ आयोजना गर्दै छ । ५ दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनी यस क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे जानकारी लिनदिन महङ्खवपूर्ण हुने ठानिएकोे छ । प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत र चीनका व्यवसायी, विज्ञ र सरोकारवाला सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् व्यवसायमा संलग्न तेजनारायण खरेल विद्युतीय व्यवसायीहरूको महासंघ फिनका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष खरेलसँग व्यावसायिक विकासका लागि प्रदर्शनीको आवश्यकता तथा यस क्षेत्रका सम्भावना तथा चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले गरेको कुराकानीको अंश :
नेपालमा विद्युत् व्यापारको अवस्था के कस्तो छ ? बताइदिनुस् न ।
पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक सुधार भएको छ । तैपनि आधारभूत आवश्यकताका लागि चाहिने १३ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न ३ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । देशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म ठूला बहुराष्ट्रिय उद्योग आउन सक्दैनन् । सरकारले सन् २०२० सम्ममा ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन भएपछि देशमा औद्योगिक वातावरण बन्छ । हाम्रो व्यवसाय पनि तीनगुणासम्म विस्तार हुन्छ । हामी उत्साहित छौं ।
विद्युत् व्यापार कुन कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक छ ?
आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र रोजगारी सृजना गर्न सबैभन्दा पहिला विद्युतीय ऊर्जा, उपकरण र प्रविधि आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत विकास, प्रभावकारी प्रस्तुति र सहज जीवनयापन गर्ने÷गराउने प्रयोजनका लागि पनि विद्युत् चाहिन्छ । समग्र आर्थिक विकास गर्न यस्तो व्यापार नभई हुँदैन । नयाँ प्रविधि मन पराउनेलाई त्यसबारे अपडेट गर्न, बहुराष्ट्रिय उत्पादकलाई छनोटको सुविधा दिन र उपकरण प्रयोगको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यापार आवश्यक हुन्छ ।
विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती देख्ने/भोग्ने गर्नुभएको छ ?
अरू व्यवसायमा जस्तै यस क्षेत्रका पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । कतिपय समस्याले व्यवसायलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने गरेको हाम्रो अनुभव छ । सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको बजार मागअनुरूपको विद्युत् उत्पादन हुन नसक्नु हो । दोस्रो समस्या भनेको बजार विस्तार हो । हाम्रो बजार फैलिन पाएको छैन । कुल विद्युत् आपूर्ति गर्न नै आयात गर्नुपरेको छ, जसले औद्योगिक माग र अरू प्रयोजनका लागि पनि उपभोक्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । इन्डक्सन चुलोलाई नै उदाहरण लिँदा, खाना पाक्दा नपाक्दै बत्ती गएमा पूरै खाना बिग्रन्छ भन्ने डरले उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी विद्युतीय सामग्रीको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा पनि समस्या छ । आयातित वस्तुको सन्दर्भ मूल्यलाई दोब्बर तेब्बर बढाउने र अनावश्यक परिवर्तन समेत गर्ने गरिन्छ । करको न्यूनतम मापदण्ड नहुनु पनि हाम्रो व्यवसायको लागि चुनौती नै हो ।
यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ त ?
भन्सार दरबारे सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर खुकुलो र यसमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ । आयातित वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धमा पनि लचिलो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड पुगेका वस्तुलाई सरकारले गुणस्तर चि⋲न दिन हिच्किचाउनु हुँदैन । विदेशी वस्तुहरूको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग सुरक्षाबारे पनि जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रले के के गर्न सक्छ ? गर्न सकिने तर नीति तथा प्रक्रियाका कारणले गर्दा व्यवहारमा चाँहि प्रयोग गर्न नसकिएका उदाहरण पनि छन् कि ?
बजारको आकार बढाउन सकिने सम्भावना छ, निजी क्षेत्रले त्यसलाई प्रयोग गर्न इच्छा देखाएको छ । सरकारको योजनाले वर्षेनी ७५/८० अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय सामग्रीको आयात तीन गुणासम्म बढ्नसक्ने सम्भावना देखाएको छ । आयातित वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि संयन्त्र बनाएर सहकार्य गर्न सकिन्छ । अर्काे उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भनिएका प्रक्रियागत जटिलता पनि फुकाउनुपर्छ ।
सरकारसँग के केस्ता अपेक्षा राख्नुभएको छ ? व्यवसाय थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न राज्यले केकस्ता नीति बनाओस् भन्ने लागेको छ ?
भन्सार दरमा पारदर्शी कानूनी व्यवस्था, आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ । निरन्तर छलफल पनि भएको छ । सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । ऐनकानून परिमार्जन गरेर सहज औद्योगिक वातावरण बनाउने हो भने लगानीको वातावरण बन्छ । बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् ।
त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनको आकर्षण मात्रैले पनि पुग्दैन, सरल प्रक्रिया र स्वस्थ वातावरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्य पक्ष पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि प्रतिबद्ध छ भनिन्छ, तपाई व्यवसायीहरू सरकारको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
सन्तुष्ट हुनका लागि सरकारले प्रक्रियागत जटिलता फुकाएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका जटिलता हटाउन लचिलोपना देखाउनुपर्छ । अरू पक्षमा पनि राज्यले तदारुकता देखाउने र प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार प्रतिबद्ध छ भनेको हामीले सुनेका छौं तर व्यवहारमा अनुभूत गर्न पाएका छैनौं । त्यसैले आशावादी मात्र छौं ।
नवौं अन्तरराष्ट्रिय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शनी भइरहँदा यस क्षेत्रको व्यावसायिकतामा के कस्ता परिवर्तन आएका छन् ? पहिले कस्तो अवस्था थियो र अहिले कस्ता परिवर्तन आएका छन् ?
प्रदर्शनी भइरहँदा २ वर्षको समयको अपडेट लिन÷दिन धेरै सहजता आएको छ । हामीले अनुसन्धान गर्ने थलो बनाएका छौं । सरकारले त्यसलाई मान्यता दिएर संयन्त्रकै रूपका विकास गर्न सके यसको अझै महŒव बढ्छ । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा सुरक्षाको पक्ष पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । इलेक्ट्रो टेक मेलामा हामीले विद्युतीय सामग्री प्रदर्शनी गर्ने र त्यसको गुणस्तर तथा प्रयोग सुरक्षाबारे सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्छाैं । त्यो छलफल व्यावसायिक विश्वास लिने÷दिने प्रयोजनका लागि पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । यसकै सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिइएको हो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको व्यापार गर्न चाहिने यस्तो मञ्चले धेरै महत्त्व राख्छ ।
पछिल्ला वर्षमा ट्रान्सफर्मरको आयातको अवस्था के कस्तो छ ?
घरेलु माग धान्नेगरी गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर हाम्रै साथीहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ । ‘निक’ले उत्पादन गर्ने ट्रान्सफर्मर नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छ । ट्रान्सफर्मर, हाई भोल्टेज वायर, लो भोल्टेज वायर, स्विच, लाइट फिक्सरलगायतमा हामी करीब करीब आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । अब सुरक्षा उपकरण, सञ्चारका उपकरण, तार र सेन्सरलगायत स्मार्ट टेकमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्नेगरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं ।
ऊर्जा क्षेत्रका विद्युतीय उपकरणहरु आयात मात्रै हुन्छन् कि स्वदेशमा पनि उत्पादन गरिन्छ ? के के आयात हुन्छन् ? के के उत्पादन हुन्छन् ?
ट्रान्सफर्मर, हाई भोल्टेज वायर, लो भोल्टेज वायर, स्विच, लाइट, फिक्सरलगायत यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने करीब २० प्रतिशत सामग्री हामीले यहीँ उत्पादन या एसेम्बल गर्छाैं । अरू सबै आयात हुन्छ । यसलाई औसतमा कुल कारोबारको करीब २० प्रतिशत स्वदेशमै तयार हुन्छ र ८० प्रतिशत जति सामग्री आयात हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।